No. 2088, Monday, March 18, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2088, Monday, March 18, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၂ ရက် (တနင်္လာ၊ မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၉)
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရထံမှ ပြတ် သားသော အဖြေမကြားရသေးသဖြင့် ပူပန်နေကြ သော ပြည်သူများသည် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်၏ မြစ်ဆုံအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ သောစကားကြောင့် စိုးရိမ်မှုများ ပြန်လည်မြင့်တက်လာနေသည်။
ဒုတိယမြောက် မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဖွင့်လှစ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်
ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဒေသ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့မြဝတီ သို့ ချိတ်ဆက်သည့်ဒုတိယမြောက် ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး တံ တား ကိုမတ်လ ၁၉ ရက်တွင် ဖွင့် လှစ်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီး ဖွင့်လှစ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ခြေဥပြင်ရေး ငြင်းခုံနေရသော်လည်း ကော်မတီအဆိုပြုချက်များ တက်လာမည်ဟု မန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင် ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြင်ချင် သူ၊ မပြင်ချင်သူရှိနေသော်လည်း အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြင် ဆင်ရေးကော်မတီအတွင်း မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုချက်များ တက်လာမည်ဟု ယုံကြည် ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကမှတ် ချက်ပြုသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသော မန်လီရွာသားများကိစ္စ RCSS တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရမည်ဟု တအာင်းပါတီပြော
ပျောက်ဆုံးနေသောမန် လီရွာသား ၁၂ ဦးပြန်လွှတ်ပေးရန် RCSS ထံတောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှုကို ရှမ်းပြည်နယ်လား ရှိုးမြို့တွင် ပြုလုပ်ရာလူ ၁,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး ယင်းကိစ္စအပေါ် RCSS အနေဖြင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရမည်ဟု တအာင်း ပလောင်အမျိုးသားပါတီက ဆို သည်။
တာချီလိတ်တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးရွားစွာကြုံတွေ့
တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရောက်လာသော မီးခိုးငွေ့များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ ခံစားလာရပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ရန် တာချီလိတ်ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက မတ်လ ၁၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
စင်ကာပူ ရေနံကုမ္ပဏီက ရွှေတောင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆီဆိုင်သစ်များ ဖွင့်လှစ်မည်
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရွှေတောင် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စက်သုံးဆီဆိုင်သစ်များ ဖွင့်လှစ် ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။
ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းတစ်တွဲကို စာရင်းမှပယ်ဖျက်
ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲအတွက် စာရင်းသွင်းထားသည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတွဲများအနက် တစ်တွဲပယ်ဖျက်ကြောင်း မတ်လ ၁၃ ရက်စွဲဖြင့် ပြပွဲကျင်း ပရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန် သည်။
ရီးရဲလ်ကစားသမားများ ပွဲထွက်ခွင့် မျှမျှတတရမည်ဟု နည်းပြဇီဒန်းပြောကြား
နည်းပြဟောင်း ဆိုလာ ရီ လက်ထက်တွင် ပွဲထွက်ခွင့် အ နည်းငယ်သာရခဲ့သော အစ္စကို နှင့် မာဆယ်လိုတို့ အပါအဝင် ရီးရဲလ်ကစားသမားအားလုံး ပွဲ ထွက်ခွင့် မျှမျှတတပေးမည်ဟု နည်းပြဇီဒန်းကပြောသည်။
ဖက်ဒဲရာနှင့် ဆီမီးပွဲမတိုင်မီ ရာဖေးလ်နာဒယ် ဒဏ်ရာကြောင့် Indian Wells Masters ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ရ
စပိန်တင်းနစ် ချန်ပီယံ ရာဖေးလ်နာဒယ်သည် ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် Indian Wells Masters ပြိုင်ပွဲမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ရော်ဂျာဖက်ဒဲရာနှင့် ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသတ်ခံရသည့်ကိစ္စ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး တပ်မတော်နှင့်ဆွေးနွေးမည်ဟု KNPP ပြော
တပ်မတော်ညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ မတ်လ ၁၉ ရက်တွင် နေပြည် တော်၌ တွေ့ဆုံလျှင် KNPP တပ် ဖွဲ့ဝင်များ အသတ်ခံရသည့်ကိစ္စ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ဆွေးနွေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နဲနယ်ပလိုးက ပြောသည်။KNPP ဒုဥက္ကဋ္ဌ ခူဦးရယ် ဦးဆောင်သည့် ဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့(မတ်လ ၁၈ ရက်)တွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC)နှင့် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
စစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင် ပထမဆုံးထိခိုက်ကျဆုံးသူက အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ ♦ ဟီရမ်ဂျွန်ဆင် (အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း)
NCA မထိုးရသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်မည်ဟု အကြောင်းပြန်
နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်မည်ဟု တစ်နိုင်ငံ လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA) မထိုး ရသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့စလုံးက အ ကြောင်းပြန်ကြားပြီး တက်ရောက် မည့် ခေါင်းဆောင်များ၏အမည် စာရင်းပေးပို့ခဲ့သည်။
ကုလားတန်မြစ်အတွင်း AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က မီးရှို့ ခဲ့သည့် သင်္ဘောသည် နစ်မြုပ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် တပ်မတော်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပြီးပါက ပြန် လည်ဆယ်ယူရန် စီစဉ်နေသည် ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရနှင့် သတင်းထုတ်ပြန် ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဆွေက မတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ပြောသည်။
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကျောက်ဆည်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးနေမှု အပေါ် ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒပြပွဲ ကို ရာချီသော ကျောက်ဆည်မြို့ ဒေသခံများက ယမန်နေ့တွင် ပြု လုပ်ခဲ့သည်။
ရွှေဘိုတွင် ပစ္စည်းလုယက်ခံရသော LGBTတစ်ဦး စကေဘာဖြင့် ၅၇ ချက်ထိုးခံရ၍ သေဆုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့နယ် ရွှေဘိုကန်တော် ကြီးဘက်၌ မတ်လ ၁၆ ရက် ညနေက အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို လူနှစ်ဦးက စကေဘာဖြင့် ၅၇ ချက်ထိုးကာ ပစ္စည်းလုယက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သပြေညိုရွှေဘိုပန်း LGBT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ချစ် လေး(ET) က ပြောသည်။
မန္တလေးသို့ လာရောက်လည်ပတ်သောခရီးသွားများအတွက် Smart Art ပန်းချီပြခန်းဖွင့်မည်
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း လာရောက်လည်ပတ်သော ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားများဝယ်ယူ နိုင်ရန် Smart Art ပန်းချီပြခန်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဟို တယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန အထက်မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းယုက ပြောသည်။
သင်္ကြန်အပြီးတွင် UPDJC အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့များကို အစိုးရအဆိုပြု
အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့ကိုယ်စား လှယ်များ အချိုးကျ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်း ချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မ တီ (UPDJC)အစည်းအဝေးကို သင်္ကြန်ကာလအပြီးတွင် ပြုလုပ် ရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များထံ မေတ္တာရပ်ခံထား ကြောင်း အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော် မရှင်အကြံပေး ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူနှင့် တရားရင်ဆိုင်ရသူ ပိုများလာ
နိုင်ငံရေးပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရသူနှင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ဦးရေ သည် ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ကထက် ပိုမိုများပြားလာကြောင်း မတ်လ ၁၅ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့် ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)၏ လစဉ်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြသည်။
အသက်(၃၀)ကျော် လာသည့် နောက်ပိုင်းတွင် အိမ် ထောင် မပြုလိုတော့ကြောင်း သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက်က ပြော သည်။
မွေးနေ့မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့ ချစ်စနိုးဦး
မတ်လ ၁၆ ရက်တွင် ကျရောက်သည့် မွေးနေ့တွင် ချစ်သူက Surprise အနေဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ကြောင်း သရုပ်ဆောင် ချစ်စနိုးဦးက ပြော သည်။
သန်းထက်အောင် ဒဏ်ရာကြောင့် နှစ်ပတ်ကျော် နားရမည်
ထိုင်းလိဂ် -၂ ကလပ် ဆာမက်ဆာခွန်တွင် ကစားနေ သည့် မြန်မာကစားသမား သန်း ထက်အောင်သည် ပေါင်ခြံဒဏ် ရာကြောင့် နှစ်ပတ်ခန့် နားရမည် ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာလိဂ်-၂ ဒုတိယအကျော့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည်
ယခုနှစ် မြန်မာလိဂ်-၂ အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပထမ အကျော့အပြီးတွင် ပြိုင်ပွဲကို သုံး လခန့်ရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁၃ ရက်၌ ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ် များ ပြန်လည် ကျင်းပမည်ဖြစ် သည်။
အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဇော်ဇော်ရွေးချယ်ခံရ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် အာဆီယံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ကွန်ဂရက်၌ မြန်မာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော် ဇော်က အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ် သည်။
၂၀၁၈ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို မတ်လ ၂၃ ရက် စနေ့နေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ The One Entertainment Park ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဆန်ခါတင် ၂၅ ကားစာရင်းတွင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောကအတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းထားသော အနုပညာရှ
နိုင်ငံ့လူဦးရေထက်ဝက် လျှပ်စစ်ရရှိခြင်းဖြင့် မှတ်တိုင်သစ်စိုက်နိုင်ဟု လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးပြော
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေ ထိုင်သည့် လူဦးရေ၏ ထက်ဝက် ခန့်ကို လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် မှတ် တိုင်သစ်တစ်ရပ် စိုက်ထူနိုင်ပြီဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ကပြောသည်။
ရိဒ်နယ်စပ်စခန်းမှ တီးတိန်အထိ နှစ်လမ်းသွား လမ်းဖောက်ရန် အိန္ဒိယစီစဉ်
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီမံကိန်းအသစ် တစ်ခုအဖြစ် ရိဒ်နယ်စပ်စခန်းမှ တီးတိန်မြို့အထိ နှစ်လမ်းသွား လမ်းမကြီးတစ်ခု ဖောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြည်နယ်စည် ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက် မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီအတွင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု လျော့ကျ
ဇန်နဝါရီက ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှုန်း စံချိန်တင် မြင့်တက်သော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီအတွင်း ပြန်လည်ကျ ဆင်းခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားညွှန် ကြားရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန် သည့် စာရင်းတွင် ဖော်ပြထား သည်။
မန်ယူ ပရိသတ်များနှင့် ဖာဂူဆန်က ဆိုးလ်ရှားကို အမြဲတမ်း နည်းပြဖြစ်စေလိုဟု ဘက်ခမ်းပြောကြား
မန်ယူပရိသတ်များ၏ ထောက်ခံမှုနှင့် နည်းပြဟောင်း ဖာဂူဆန်၏ ထောက်ခံမှုတို့က ဆိုးလ်ရှားကို အမြဲတမ်းနည်းပြဖြစ် လာစေရန် အထောက်အကူပြု မည်ဟု ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကပြော သည်။
အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန် ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်မည်ဟု အပြန်အလှန်ခြိမ်းခြောက်
အိန္ဒိယက ပါကစ္စတန်ဘက်သို့ အ နည်းဆုံး ဒုံးကျည်ခြောက်စင်းပစ် လွှတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြီး ပါကစ္စတန်အစိုးရက ၎င်းတို့အနေ ဖြင့် ယင်းဒုံးကျည်ပမာဏထက် သုံးဆ ပြန်လည်ပစ်ခတ်မည်ဟု ပြောကြားကြောင်း နယူးဒေလီ၊ အစ္စလာမာဘတ်နှင့် ဝါရှင်တန်ရှိ သံတမန်များနှင့် အစိုးရအရင်းအမြစ်များ ပြောစကားများအရ သိရသည်။